Madaxweynaha Yugaandha Oo Booqasho Kedis Ah Ku Tegey Muqdsiho, Dareenka La Xidhiidha Socdaalkiisa Iyo Hogaamiye Kooxeedyadii Oo Dib Loo Abaabulay | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweynaha Yugaandha Oo Booqasho Kedis Ah Ku Tegey Muqdsiho, Dareenka La Xidhiidha Socdaalkiisa Iyo Hogaamiye Kooxeedyadii Oo Dib Loo Abaabulay
Muqdsiho(ANN)Madaxweynaha Dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa Booqasho kedis ah maanta ku tegey magaalada Muqdisho. Sida ay sheegayaan wararku Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa si kedisa ah uga soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xiligaa
waxaa garoonka aad usoo buux dhaafiyay taangiyada ciidanka Uganda oo ku sugnaa Hotel Baradheys ilaa iyo albaabka garoonka.
Ma jirin cid la socotay socdaalka madaxweynaha Uganda ee Muqdisho, halkaas oo uu ku sugnaa qadar Nussa saac ah. Ka hor intii aanu ka dhoofin madaarka Magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegayaan wararka socdaalka Mr. Yoweri Museveni, wuxuu kulamo deg deg ah la yeeshay saraakiisha ciidamada AMISOM eek u sugan Muqdisho, gaar ahaan saraakiisha Ciidamada Uganda iyo sidoo kale Madaxweyne Shariif iyo R/wasaare Farmaajo oo looga yeedhay xarunta Villa Somalia .
Kulankaa oo wararku sheegayaan inuu ahaa mid muhiim ah ayay Sedxda Mas’uul ku yeesheen guri ku dhaw Garoonka Muqdisho oo ay leeyihiin ciidanka AMISOM, iyadoo ay wararka tibaaxaha kasoo baxay sheegayaan in dhinacyadu kulankaa kaga wada hadleen arrimaha amaanka iyo sidii Dowladda KMG ah looga samata bixin lahaa awood darada.
Dhinaca kale xoggo ku saabsan socdaalka Madaxweynaha Uganda ayaa sheegaya in ujeedka socdaalka Mr. Yoweri Museveni, ay tahay sidii uu niyadda ugu dhisi lahaa ciidamadiisa dagaalada qaraar uga jira magaalada Muqdisho, madaxweynaha Uganda ayaa si aad ah u taageera dowladda KMG ah.
Iyadoo Socdaalka Madaxweynaha Uganda ee Muqdisho Niyadda u dhisayso Golaha wasiirada xukuumadda cusub oo Niyad jab ka muujinayay diidmadii ay Baarlamaanku ka muujiyeen ansixintooda, balse markii dambe la ansixiyay. Dalka Ugana waxaa magaalada Muqdisho ka jooga ciidan aan ka yarayn Afar kun oo Askari, kuwaas oo ilaaliya xarumaha dowladda halka kuwa kalanena ay dagaalo goo goos ah ku dhexmaraan Magaalada Muqdisho kooxaha mucaaridka ee Al-shabaab iyo xisbul Islaam oo inta badan ka taliya deegaamadaa.
Dhinaca kale waxa jira warar socdaalka kediska ah ee madaxweynaha Uganda la xidhiidhinaya siyaasad cusub iyo arrimo milateri oo laga wado halkaa, iyadoo Sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafey ay ciidamada AMISOM soo dagaal geliyeen Maleeshiyaad daacad u ah hogaamiye kooxeedyadii xiliyadii hore ka talin jiray Muqdisho, iyadoo ay wararku sheegayaan in Yuusuf Indha- Cadde iyo Maxamed Dheere dagaaladii u danbeeyay ka qayb qaateen. kadib markii ay ciidanka Dowladda KMG ah mushaar la’aan aawgeed baneeyeen jiidaha dagaalka oo ay isku hor fadhiyaan xoogaga Islaamiyiinta.
Warar laga helay dhinaca Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Maxamed Dheere oo ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii Muqdsiho ee hubka laga dhigay hada loo ogolaaday mushaarka 300, oo Maleeshiyaad ah, iyadoo lagu xidhay shuruud ah in Maleeshiyaadkaasi ay si hagar la’aan ah uga qayb qaataan dagaalada lagula jiro Xarakada Al-Shabaab AMISOM eek u sugan muqdisho.
Sidoo kale Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha -Cadde) ayaa loo ogolaaday in Mushahar loo siiyo 600 oo Maleeshiyo beeshiisa ah, Indha Cadde , kaas oo hadda haysta qandaraas dhaqaale badan uu ku helayo oo ah mid uga wanaagsan wasiiru dowlnimadii uu dowladda ka hayay, iyadoo ay wararka arrimahaa la xidhiidhaa sheegayaan in Mr. Indha Cadde uu ciidamada AMISOM kala talin doono dagaalada Muqdisho, islamarkaana ay maal gelinayaan safaaaradaha dalalka reer Galbeedka ee ku sugan magaalada Nairobi.
Siyaasada cusub ee noocan ah ayaa ka danbaysay. Kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay ciidamada dawlada taagta daran eek u sugan Muqdisho iyo kuwa AMISOM ay ku guuldaraysteen inay wax ka qabtaan xaalada, isla maraakana la ogaaday inay ciidamada DKMG ee taagta darani hibkooda ka iibiyaan kooxaha xarakada Al-shabaab ee dagaalka kula jira.